Boqorka Sucuudiga oo Amiirka Qadar ku martiqaaday shirka Golaha Iskaashiga Khaliijka - Halbeeg News
Boqorka Sucuudiga oo Amiirka Qadar ku martiqaaday shirka Golaha Iskaashiga Khaliijka
RIYAADH(HALBEEG)-Sida ay shaacisay wakaaladda wararka Qadar, Boqorka Sucuudiga ayaa Amiirka Qadar, Tamiim Bin Xamad Althaani ku casuumay in uu ka soo qeyb galo shirka Golaha Iskaashiga Khaliijka oo 9-ka bishan lagu wado in uu ka furmo magaalada Riyaad ee caasimadda dalka Sucuudiga.
Ku dhawaaqista casuumaadda Amiirka dalka Qadar ayaa kusoo aadeysa kadib markii dowladda Qadar ay isaga baxday Ururka dowladaha shidaalka dhoofiya ee OPEC.
Wakaaladda wararka Qadar ayaa barteeda Twitterka ku daabacday in Amiirka dalka Qadar uu casuumaad ka helay Boqorka dalka Sucuudiga si uu uga qeyb galo Shirka Golaha Iskaashiga Dowladaha Khaliijka.
Casuumaadda ayaa waxaa Amiirka Qadar soo gaarsiiyay xoghayaha guud ee Golaha Iskaashiga dowladaha Khaliijka Abdulatif Al-Zayani intii lagu guda jiray soo dhoweytii Wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka Qadar Suldaan Bin Sacad Al-Muraikhi.
Dooxa weli faallo kama bixin heerka ergada Qadar ku matali doonta shirka Golaha Iskaashiga dowladaha Khaliijka ee ka dhici doona Riyaad.
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sucuudiga oo ay qeyb ka yihiin Imaaraadka iyo Baxreyn ayaa sanadkii hore cunaqabateyn badda, dhulka iyo cirkaba saaray dalka Qadar.
Shirkii Iskaashiga dowladaha Khaliijka ee sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay Kuweit ayay dowladaha Sucuudiga, Baxreyn iyo Imaaraadka waxa ay soo dirsadeen wasiirro iyo madax kale si ay ugu matalaan shirka.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo warqadaha aqoonsiga laga guddoomay